Umfanekiso owaziwayo wamaNazi kukuba babenqabileyo ngamaKristu xa amaKristu azinikeleyo ayengqubuzana noNazi. Inyaniso kukuba amaJamani aseJamani axhasa abaseNazi ngenxa yokuba babekholelwa ukuba uAdolf Hitler wayeyisipho kubantu baseJamani abavela kuThixo. UbuKristu baseJamani babunqulo olunyanzeliswe nguThixo oluhlanganisana nemfundiso yobuKristu kunye nomntu waseJamani ngendlela ekhethekileyo neyinqwenelekayo: UbuKristu bokwenyaniso buyiJamani kunye neyona Yinyaniso yamaJamani yayingamaKristu.
Yintoni eyayibuKristu obuhle?
Inkqubo yeNkatha yeNtshona yeNtshona Koloni ichazwe ngenye inqaku: "Sifuna inkululeko yazo zonke iinkolelo zenkolo kwimeko, ngaphandle kokungabikho ingozi okanye ukuphikisana namasiko kunye nemilinganiselo yokuziphatha yesizwe saseJamani. Iqela elinjalo limelela umbono wobuKristu obuhle, ngaphandle kokuzikhethela ukuvuma okungakumbi .... "UbuKristu obuhle balandelelwa kwiimfundiso ezisisiseko ze-orthodox kwaye bathi ubuKristu bufanele bube nempembelelo enobomi kubantu.
UmKristu onxamnye nobuYuda
Ulwaphulo-mthetho lwaluyinto ebalulekileyo yombuso wamaNazi, kodwa amaNazi awayifumanga; Kunoko, bahamba kwiinkulungwane zamaKristu angqubuzana namaYuda kunye nenkolo ephilileyo yamaSemitic eJamani yamaKristu. AmaNazi ayekholelwa ukuba umYuda wawungekho nje inkolo, isikhundla esasixhaswa yienkokeli zonqulo ezazisa amaNazi ngamaphepha okubhaptizwa kunye nemitshato ekuncedeni ukuchonga amaYuda aguqukileyo.
UmKristu olwa noKomanisi
Ulwaphulo-mthetho lube luleke kakhulu kwiinkqubo zamaNazi kunezochasayo. AmaJamani amaninzi ayesabiswa yi-communism waza wabona uHitler njengosindiso lwabo lobuKristu. Ingongoma yama-communist yabonakala yinyani ngenxa yokuba ii-communist zithathile iRussia ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi I kwaye yaphatha ngokufutshane eBavaria.
Iqela lamaNazi lalikwachasene kakhulu nentlalo-ntlalontle, ngokokuthi inzululwazi yendabuko yayihlekwa yinto ehlekisayo njengengakholelwa kuThixo kunye namaYuda.
UmKristu ochasene no-Modernism
Isibalulekileyo sokuqonda ukuthandwa kukaNazism kunye namaKristu kukugwetywa kwamaNazi yonke into yanamhlanje. IJamani emva kweMfazwe Yehlabathi I yayithathwa njengophabliki ongamhloneliyo uThixo, wezinto eziphathekayo eziphathekayo eziphathekayo ezonakalisa yonke imilinganiselo yemveli yaseJamani kunye neenkolelo zonqulo. AmaKristu abone intlalontle yoluntu lwawo engabonakaliyo kwaye amaNazi athembise ukubuyisela umyalelo ngokuhlasela ukungahloneli uThixo , ubungqingili, ukukhupha isisu, inkululeko, ukuhenyuza, ukugqithisa, ukugqithisa, kunye nokunye.
UbuKristu bamaProtestanti noNazism
Kuyabonakala ngokubanzi ukuba amaProthestani atyelelwa ngakumbi kwiNazism kunamaKatolika. Oku kwakungeyona nyaniso kuyo yonke indawo eJamani, kodwa asiyikunyaniseka into yokuba amaProthestani, kungekhona amaKatolika, avelise intshukumo (amaKristu aseJamani) azinikezele ukudibanisa imibono yamaNazi nemfundiso yobuKristu. Abafazi bamaProtestanti babethandwa ngakumbi kwiNazism ngenxa yokugcinwa kwenkcubeko kunye nokukhuthazwa kweendima zentlalo yoluntu. I-Nazism yayingeyona ihlelo, kodwa amaProthestani ayayithanda.
UbuKristu bamaKatolika kunye noNazism
Ekuqaleni, iinkokeli ezininzi zamaKatolika zagxeka iNazi; emva kowe-1933, ukugxekwa kwaphendukela ekuncedeni nasekudumiseni.
Ukungafani phakathi kweNazism kunye namaKatolika kwakuchasene nobuthathaka, ukuchasene nokukholelwa kuThixo, kunye nokuchasana nemfundiso. Iicawa zamaKatolika zancedisa ukuchonga amaJuda ngokutshabalalisa. Emva kwemfazwe, iinkokeli zamaKatolika zanceda amaNazi angaphaya amandla (amaNazi ayengcono kunezo zentlalo). Ilifa lobuKatolika ukusuka kwiJamani laseNazi libandakanya intsebenziswano, kungekhona ukuchasana; ayiyikukhusela umgaqo kodwa ukukhusela amandla asekuhlaleni.
Ukuphikiswa kobuKristu kuNazism
Ngokuqhelekileyo, "ukuxhatshazwa" kwamaKristu kwakungenxa yokuzama ukulawula ngakumbi imisebenzi yecawa. Iicawa zamaKristu zazimisela ukunyamezela uxhatshazo olusasazekayo kumaYuda, ukulungiswa kwezempi, ukuxhatshazwa kweentlanga zangaphandle, ukuvinjelwa kweemanyano zabasebenzi, ukuvalelwa kwabantu abachasayo kwezopolitiko, ukugcinwa kwabantu abangenzi mthetho, ukunyanzelisa abantu abakhubazekile, njl njl.
Oku kuquka iChurch Confessing. Ngoba? U-Hitler wabonwa njengomntu obuyisela ukuziphatha kunye nokuziphatha okuqhelekileyo eJamani.
UbuKristu Ngasese, UbuKrestu KuLuntu
Ngaba uHitler kunye namaNazi kuphela abhenela ubuKristu njengengqungquthela yezopolitiko kwaye agxininise ubuKristu kuluntu ngaphandle kwenjongo yokukhuthaza ubuKristu? Akukho bubungqina bokuthi uHitler kunye namaNazi aphezulu kuphela avumela ubuKristu ukuba basebenzise. Amazwi abucala kwiinkonzo nakwabuKrestu ayefana neengxelo zoluntu, ezibonisa ukuba bakholwa oko bathethayo kwaye bazimisele ukwenza njengoko babethi. AmaNazi ambalwa awamkela ubuhedeni ayenjenjalo, ngaphandle kwenkxaso esemthethweni.
Adolf Hitler, Nazism, kunye neNgxaki yobuKrestu bobuzwe
Ukuhlaziywa kweMveli yobuqhetseba abangamaKristu kwiNkohlakalo kunye namanye amacala obuNazi agxila kwizinga apho amaKristu avumela ukuba asetyenziswe ngeenjongo zamaNazi, kodwa oku kubonisa ukubahluko phakathi kwamaNazi namaKristu angenakho. AmaKristu ayexhasa ngokusisigxina i-ajenda yamaNazi. AmaNazi amaninzi ayengamaKristu azinikeleyo kwaye akholelwa ukuba ifilosofi yamaNazi yayidalwa yimfundiso yobuKristu.
AmaKristu namhlanje ayafumaniseka ukuba unqulo lwawo lunokuba nolunye ufana noNazism, kodwa kufuneka baqaphele ukuba ubuKristu - kuquka neyabo - buhlala bukhokelwa yinkcubeko ecaleni kwayo. AmaJamani ekuqaleni kwekhulu lama-20, ubuKristu bekuninzi buchasene namaSemiti kunye nobuzwe. Le nto yayingumgangatho ofana nawo amaNazi afunyanwe kakhulu ngenxa yeengcamango zabo-bekuya kumangalisa ukuba iinkqubo ezimbini azifumananga zifana kwaye zazingakwazi ukusebenza kunye.
AmaKristu amaNazi awazange amshiye iimfundiso zobuKristu ezisisiseko, njengobuqaqawuli bukaYesu. Inkolelo yabo yonqulo eyona nto yayiyikukhanyela ubuYuda bukaYesu, kodwa nanamhlanje kukho amaKristu aseJamani aphikisayo xa uYesu ejolise ebuYuda. AmaKristu amaNazi awazange alandele inguqulo ye-idiosyncratic yobuKristu okanye "yayisifo" kunye nenzondo kunye nobuzwe. Yonke into malunga nobuKristu bamaNazi sele ikhona kumaKristu aseJamani ngaphambi kokuba amaNazi eze kwindawo.
Izenzo zikaHitler namaNazi zazingathi "ngamaKristu" njengabo bantu ngexesha leNkqubela okanye kwi-Inquisition. Abanye abaNazi abahamba phambili bakhetha inkolo yobuKristu be-neo-pagan, kodwa le nto ayizange ivunywe ngokusemthethweni nguMbutho wamaNazi okanye uAdolf Hitler. AmaKristu akanakuthanda ukubona iNazism njengento enxulumene nobuKristu, kodwa iJamani yazibona njengesizwe esingumKristu kwaye izigidi zamaKristu zaseJamani zamkela ngokuzithandela uHitler kunye neNazi yePanethi, ngenxa yokuba babona bobabini njengemilinganiselo yeJamani kunye namaKristu. .
Amalungelo aSeko awabhalwa phantsi kuMgaqo-siseko
Umyalezo Wephutha: Awukwazi Ukufumana Uphawu
Iikhompyutheni zeeNkcazo zeNkcazo zeeNkcazo zeeNkcazo kunye nabaBhali
I-Moon yakho Ingene kwiCapricorn kwi-Astrology
Yakha i-Character ye-Manga Character
Uluhlu lweZikolo zoLuntu zeZikolo eziHlazileyo kwi-West Virginia Students, K-12
Ngubani Umculi Owusayine Le Peyinti?
Imbonakalo (imifanekiso yentetho)